Baqattoota Naayiroobii: furmaata tokkollee argachuutti hin jirru Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBaqattoota Naayiroobii: furmaata tokkollee argachuutti hin jirru
Qaqattootni Oromoo Naayiroobii jiran rakkoo keessa akka jiran dubbatu
(bbc-afaanoromoo)—Baqataan Oromoo ka Naayiroobii jiruu, hedduun magaalaa Isiliiti gala. Magaallii Isilii, magaalaa waca, nami sadarkaa cufaa keessa jiru, lafa yoo bona dhukkee fi awwara yoo roobaa, dhoqqee fii lolaa.
Isilii karaan himan, karaan sadii hanga 12, daldala akka akkaati jira, ka nami lakkoofsa hin qamne. Yoo magaalaa kana hin beene baduun ke hin ooluu.
Namaa fi makiinan akka takka gaha, seenu fi bahinsii rakkoo.
Nama waggaa hedduu wali-hin argini,Isiliiti arguu dandeeta.
Ammo, magaalaa kana, karaa lama baqataa Oromootin beekaan. Ka garachaa buluuf ka hin buleeti wal keessa jira.
Nami duraan nuu garee, Kadijjaa Kadir, Isilii keessatti suuqii gurgurti.
Miidhaa nuu keessa jirru nama gabruma keessa jiruun takkaa jetti.
Waggaa 16 Naayiroobi jiraadha jet, gaafa duraan dhufte dubartii, oboleyaan isiiti baqate isi walin dhufe.
Amma haadha ilmaan afuri.
“furmaata tokkolle argachuu hin dandeenne waggaa kana guutu, yoo UN deemani hiyyatanillee gargaarsa akkasi homaa isani godhuu hin dandeenu nurraa deema jedhani” jetti Kadijjaan.
Baqataan Oromoo ka Nairobii jiruu, hedduun magaalaa Isiliiti gala.
Eegii bara 2015, UNHCR bira deeme, adeemsii kiyya irra gaafadhaa, ammo gargarsa hin arganne jetti.
Dhiyoo tana waajira UNHCR deemte, waraqaa kee dhabamee jira jedhanin, eegi suni dhukkubde ciifti.
Jiruun akkam jenne gaafannaan, sokkite. Nurraa siixxee, gara suuqii keessatti deebite, bootte.
Abbaan manaa isii hojii hin qabu, isiin suuqii gurgurti.
Daqiiqa 20 duuba nuun dubbatte. Jireenya, lubbuutti nu keessa jiraa male, homaa hin qamnu jetti.
Waggaa heddu dhukkubsattee, waan qorsaan bittatu dhabde.
Waan UN jala jirtuuf , hospitaala mootumma heddu deemte, ammo tajaajila dhabde. Ka onneen dhukubdu, qorsa mataa naa kennani jetti.
Ijoolleen isii tokkoleen mana barumsa hin jirtu
Nami tokko yoo baqatummaan isa murtaaefi jedhe, wanni waggaa 20, waggaa 15 biyya tana keessa ta’ufi maali, seera maaltu akkasi jedhaa”
Gammadoo , Baqataa
Zubeyida Mohammediis mana isii diqqaa keessa teette, waan guyyan kun fiduuf eeggatti, nami harka wa hin qamne akka sare funana deema jetti.
”Guyyaa cufaa bo’a deema, Yaa Rabbii maaf as nuu fidde, maaf rakkoo tan keessa nu keetta?” jechuunin booha jetti.
“Naayirobii keessatti, kadhadhee, beela’ee, dheebodhee, ijoollee tiyya bulchaa bahe” jetti Zubeyidaan.
Zubeyidaan haadha ilmaan shani, hojii hin qabdu, abbaan mana isii hujji halkan balbal nama eegan dalaga.
Akkuma Kadijjaa, ijoolleen Zubeyidaa barumsa keessaa hin jirtu.
Gammadoon biyyatti galuu baayyee feena jedha
Gammadoo Amaloo hodhaa uffata akka baqataa hedduu ka Naayiroobi jiraatu.
”Waggaa hedduu biyya tana jiraanne, maaf akkana nama godhanii jedha” Gammadoon ka waggaa 7 baqataa ta’ee jiru.
Yeroo biyya bahe dalaga mootummaa harka qaba, nama wayii tarkaafi irra fudhaadha, ijjeesaa nuun jedhani jedha.
“Nami ijjeesaa jedhani, nama nuu waliini dalaga irra jiru, murtii sun fudhachuu dinnee, baqanne biyya baane” jedha Gammadoon.
Ji’a tokkoon booda UNHCR deeme galma’e, waraqaa fudhate. Ammo dhaabbata kana bira laafinaatu jiraa jedha .
“Nami tokko yoo baqatummaan isa murtaa’efi jedhe, wanni waggaa 20, waggaa 15 biyya tana keessa ta’ufi maali, seera maaltu akkasi jedhaa?” jechuunis gaafata.
Akka baqataa kanaatii, yoo baqatummaan kee murta’e, kara biyya sadafa darbu qaba, ammo kun warraa abjuu.
Nami hedduun ijoollumaan baqatee waggaa hedduu ka biyya sadaffaati hin dabarsin tura. Gaafin namoota kana, ” Nami ka gannaa 26 Naayirobi dhufe, waggaa 20 asi jiraate, garaa jiruuti deemuti jira mo, garaa du’uti deemu jira?”
“Gannaa inni sila dalaga qabatuutti la dhumate”
UNHCR Maal jedha
Itti aantuun itti gaafatamtuu UNHCR damee Keeniyaa Walpurga Engilbreekti, biyya sadaffaa deemuun mirga mitii, carraa jetti.
Namootii yoo biyya ufiiti baqatee dhufe, biyyaa sadaffaatti darbuu akka mirgaatti tilmaamaa, ammo biyya bira deemu dhabuun danda’a jetti Walpurgan.
Biyya sadaffaa deemuun mirga mitii, carraa.
Walpurga Engilbreekti, Itti aantuun itti gaafatamtuu UNHCR Keeniyaa Walpurga Engilbreekti
Waan fayyaa irra, UNHCR baqataa dadhabaa kaffalti ji’a ka 500 dhaabbata fayya kenya ka NHIF baasee wala’ansa argachuu danda’u.
Ammo hospitaala tokkolee walitti-dhufiinsa hin qamnu jedhan.
“Ammo nama of hin dandeenne, gatii-deemsaa argachuu danda’ani.”